May 17, 2020 3510
दण्डहि’नताको परा’काष्ट कहाँ सम्म छ भन्ने कुरा यो घ’टना हेरेपछि थाहा हुन्छ । एक जना ११ वर्षकी बालिका माथि जसले गिद्धेदृ’ष्टि लगाए उसैले ज्यान मा’र्ने ध’म्की दिएपछि अहिले पुरै परिवार विस्थापित भएको छ । छोरीलाई लिएर उनी’हरु लुक्दै बसेका छन् ।
लकडाउनका कारण कतै बाहिर जान नपाउने र ध’म्कीका कारण लुकेर बस्नुपरेका कारण अहिले उनीहरु भो’कै बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
मादी गाउँपालिकाको एक जना ११ वर्षकी बालिकालाई ६० वर्षका पुरुषले करणी प्रयास गरेका छन् । यो कुरा बाहिर खुलेपछि घ’टना लुकाउन बालिकाको वुवालाई १० हजार रुपैया दिएर मिलाउन दवाव दिइन्छ । ६० वर्षका पुरुष र उनका समर्थकले ध म्की दिएपछि अहिले ति बालिका लुकेर पोखरा महानग’रपालिकाको एउटा कुनै स्था’नमा लुकेर बसेका छन् ।
सो परिवारमा ९ महिनाको सानो बाल’क पनि छन् । ११ वर्षको छोरीलाई त्यस्तो हर्कत गर्ने पुरुष र उनका आफन्तले ध म्की दिएपछि परिवार नै विस्था’पित भएका हुन् । वैशाख २ गते ति पुरु’षले आफुमाथि त्यस्तो हर्कत गरेको बालिकाले बताएकी छन् ।
‘म पानी सारीराखेको बेलामा त्यो बाजे आउनु’भएको थियो, मलाई समातेर भित्र लिएर जानुभयो, मेरो मुख थुनिदिनुभयो र आफ्नो लुगा खोल्न’ थाल्नुभयो’, घ’टना विवरण सुनाउँदै ११ वर्षकी’ बालिकाले भनिन् ‘मेरो मुख थुनेको’ले बोल्न मिलेर मैले हुँदैन भनेर टाउको हल्लाए । त्यही बेलामा ठुलो ममी आउनुभयो ।’
उनी आफ्नो छिमेकी भएको र आफुले बा’जे भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको बताइन् । घरमा बुवा आमा काममा बाहिर गएको मौका छोपेर त्यस्तो कु’कर्म गर्न लागेको बताइन् ।
ठूलोममीले देखेर आफ्नो बुवा’आमालाई बोलाउन लागेपछि उनले ध’म्की दिएको बताइन् । उनको ठूलो आमाले किन यस्तो गरेको भनेर हप्काउँदा कसैलाई भन्यो भने मा’रिदिन्छु भनेर ध’म्की दिएपछि कसैले केही नभनेको बताइन् ।
पुरुषले मा’रिदिन्छु भनेर ध’म्की दिएका कारण आफुले आमा’बुवालाई पनि केही भन्न नसकेको बताइन् । तर ति पुरुषले फेरी पनि त्यस्तै हर्क’त गर्न नखोजेपछि भने बालिका’ले आफ्नो बुवाआमालाई भनेको बताइन् ।
मलाई मा’रिदिन्छ की भनेर ड’राएर बुवाआमालाई भनेको थिइन्, तर त्यो बाजेले मलाई जता देखेपछि म आउँ ? भनेर ड’राउन दिन थाले त्यसपछि मेरो जिन्दगी व’र्वाद पारिदिन्छ भनेर बुवाआमालाई भनेको बताइन् ।
वुवाआमाले कुरा थाहापाएपछि गाउँका सबै मिलेर १० हजार रुपैया दिएर मिलाउने कोशिष गरे । तर छोरीको जिन्दगीको सम्झौता १० हजारमा नगर्ने भन्दै प्रहरी’कहाँ उजु’री दिएपछि ज्यान मा’र्ने ध’म्की दिएको बताए । उनले ति ब्यक्तिको नाम पनि भिडियो’मा सार्वजनिक गरेका छन् । भिडियो हेर्नुहोस..
Prevएम्बुलेन्समा बसे’की गर्भवती’ महिलाको पेटको पटुका फुकाएर हेर्दा सबैजना चकित…
Nextभोलि जेठ ५ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस्
पुण्य गौतमलाई अहिले एक्का’सी के भयो ? लाइभमै आएर यसो भने (भिडि’यो सहित)